> Resource> Mac> MacBook Draịvụ Iweghachite Tutorial
Olee otú Naghachi Data si MacBook Draịvụ?
Hi niile, nwunye m MacBook kwụsịrị-arụ ọrụ. M na-eche na ọ bụ mmekwata. Lee, m na-arịọ banyere otú m ike weghachite data si MacBook ike mbanye. M maara ike mbanye format bụ HFS. Ya mere, onye ọ bụla nwere ike ịgwa m ụfọdụ ngwọta? Ezi echiche.
MacBook gbajiri ma ọ bụ ike mbanye ure nwere ike ịbụ ndị kasị jọgburu onwe nsogbu n'ihi na ị. Ị nwere ike iji gị MacBook ọzọ na ị na-anya isi na ihe niile data na gị MacBook ike mbanye nwere ike-efu. Ma nke a ọ bụ eziokwu? Azịza ya bụ nnọọ ihe ọ bụla. Ị ka nwere ohere iji weghachi data si MacBook ike mbanye, ọbụna ma ọ bụrụ na ị pụghị reboot gị MacBook.
A bụ m Aro: wepụ gị MacBook ike mbanye na jikọọ na ya ọzọ Mac kọmputa, na mgbe ị nwere ike na-agbalị na-agbake data site na ya na enyemaka nke a MacBook ike mbanye mgbake ịba uru dị ka Wondershare Data Recovery for Mac. Ọ bụ a omume ọma e Mac data mgbake na-enyere gị iji naghachi uka data gị MacBook ike mbanye, gụnyere oyiyi, videos, akwụkwọ faịlụ, ozi ịntanetị, wdg n'agbanyeghị na ị data furu efu si a ike MacBook ma ọ bụ site a gbajiri / emerụ MacBook , nke a ngwá ọrụ ike mfe mgbu gị mfe.
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery si n'okpuru na mgbe ahụ i nwere ike igosi MacBook ike mbanye ole na ole clicks.
Naghachi Data si MacBook Draịvụ na 3 Nzọụkwụ
Ọ bụrụ na ị na-aga iji weghachi data si ike mbanye na a ike MacBook, ị dị nnọọ mkpa ka ibudata ma wụnye Wondershare Data Recovery na gị MacBook na ẹkedori ya iṅomi ike mbanye;
Ma ọ bụrụ na gị MacBook e tiwara ma ọ bụ merụọ, i kwesịrị iji ọzọ Mac kọmputa na-eme otú ahụ.
Ugbu a, ka naghachi data si ike mbanye na a ike MacBook ike mbanye.
Nzọụkwụ 1 Launch Wondershare Data Recovery for Mac na-amalite MacBook ike mbanye data mgbake
Ozugbo wụnye na launching Wondershare Data Recovery, ị ga-ahụ ihe interface na-enye gị na ọtụtụ mgbake nhọrọ. Ebe i nwere ike apụ na-"Echefuola File Iweghachite" dị ka a na-agbalị.
Ebe a ka na-agbalị na "Echefuola File Iweghachite" mode naghachi ehichapụ oyiyi si Mac Obere. I nwekwara ike na-agụ ntuziaka na window na họrọ ụzọ ndị ọzọ na ona ị kasị.
Cheta na: Ihe omume window depụtara ntụziaka nke dị iche iche mgbake nhọrọ, biko họrọ onye na-ezukọ gị mkpa kasị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi MacBook ike mbanye anya n'ihi na furu efu data
Na nke a nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa họrọ nri ike mbanye na pịa "iṅomi" ịchọ furu efu faịlụ.
Biko họrọ nri faịlụ Ọkpụkpọ gị MacBook ike mbanye site "Họrọ ịgụ isiokwu File System" ke window. Na ọ bụrụ na gị faịlụ na formatted si gị MacBook ike mbanye, ị nwekwara ike "Kwado Deep iṅomi" ke window.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data si a gbajiri MacBook, biko mee ka n'aka na draịvụ ike nwere ike ọma ejikọrọ na ndị ọzọ Mac kọmputa.
Nzọụkwụ 3 weghachite data si MacBook draịvụ ike selectively
Mgbe scanning, niile natara faịlụ gị MacBook ike mbanye ga-egosipụta na window. Ị nwere ike ịlele otú ọtụtụ faịlụ na ị ga-enwe ike iji weghachite si faịlụ nchekwa na faịlụ aha.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka pịa "Naghachi" ma họrọ a ebe ọzọ ike mbanye ịzọpụta Natara faịlụ.
Olee otú iji tọghata WebM ka MP3 on Mac OS X (El Capitan gụnyere)
Aspyr Media: The Sims 2 n'ihi na Mac